शीतल निवासको नाम बेच्दै, निबुवा भाङको अचार माग्ने ? – समावेशी
शीतल निवासको नाम बेच्दै, निबुवा भाङको अचार माग्ने ?
आइतबार, जेठ २६, २०७६ | १२:४०:२३ |
काठमाडौं । आफैँमा भद्र स्वभाव, कसैलाई बिझ्ने गरी, हप्कीदप्कीको स्वरमा बोल्ने बानी नै छैन, सम्माननीय राष्ट्रपतिको । तर, यो भद्रताको फाइदा उहाँकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको चर्चा सिंहदरबारतिर चल्ने गरेको छ ।
शीतलनिवासबाट खटिएका कर्मचारीले असम्बन्धित मन्त्रालयका हाकिमलाई फोन गर्ने र अनेकन नाजायज माग तेस्र्याउने क्रम बढेको छ । उनीहरुले राम्रो कन्डिसनको गाडी भन्ने, बाटोमा लञ्च वा डिनरका लागि ताकेता गर्ने वा विभिन्न कोशेली माग्ने गरेको गुनासो छ । यस्तो मारमा परेका छन्, कृषि सचिव युवकध्वज जिसी । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट बोलेको, गाडी चाहियो’ भन्दै कुनै कार्यक्रममा व्यस्त भइरहँदा फोन आएपछि मुर्मुरिने नै भए ।
तर, ठाउँबाटै फोन आएपछि ‘नाइँ’ भन्न पनि नमिल्ने । लुम्लेको माछा, बन्दिपुरको बाख्रा फार्मछेउछाउ बसेर दिउँसो बियर, सेकुवासहितको लञ्च, फर्किंदा निबुवा, भाङको अचारजस्ता माग । अहिले युवकध्वज जिसी ‘यस्तो ग¥यो, उस्तो ग¥यो’ भनेर ठाउँ–ठाउँमा गुनासो पोख्दै हिँडेका छन् ।
युवकध्वज त सिंहदरबारमै सास्ती खेप्ने पछिल्ला उदाहरण भए । जिल्लाका सिडिओ, एसपी, डिएसपीका पीडा फरक फरक छन् । ‘नमानौँ, सम्माननीयज्यूसँग जोडिएका मान्छे । मानौँ, पु¥याउनै नसकिने’, एकजना सिडिओले सुनाए ।
जनआस्था जेठ २२ बाट